Guyyaan Jaalalleewwanii Anaaf Guyyaan itti Lubbuu koo Dhabe dha!!
14 Feb 2017 Kan maxxanse Odaa Gurree
Waggaa Har’aan Lubbuu koo dhabe!
Yaa firoota koo seenaa koo kana akka obsaan dubbiftan isiniin jechuun barbaada. Tarii namni seenaa akka kanaa dhaga’uu fi dhaggeeffachuu hin barbaadne jira jedhee hin yaadu. Ta’us waan ollaa ofiirra gaherraa waa barachuun gara fuula duraatti deemuun gaarii dha.
Ani kan dhaladhee guddadhe Godina Shawaa Lixaa,Magaalaa Baakkooti. Mana barumsaa haga kutaa 10 baradhe. Kutaa 10 booda qabxiin Qophaa’insaa waan naa guutuu dideef barnoota dhuunfaan barachuuf gara Magaalaa Naqamtee deemeen ”New Generation University College” baradhe. Achitti barnoota Accounting waggaa sadiif ergan hordofeen booda Dipiloomaan eebbifamee bahe. Hojii bakkeewwan adda addaa deemee osoo barbaaduu argachuu dhabe. Hiriyyaan dhiiraa koo kan waggaa saddeet waliin turre hojii dhabuu koo kana hedduu obsa dhabaa dhufe. Isan hojii dhabe caalaa isa inni dhiphatuu fi jeeqamuutu boqonnaa na dhorkataa dhufe. Isa gammachiisuuf jecha, bakka adda addaa deemee yommuun hojii dorgomee deebi’u amma hojii argachuufan jedha osuman jedhuunii waggaa lama mana taa’e. Boodarra amalli isaa natti jijjiiramaa dhufe. Hiriyyoota isaa hunda biratti waameen isa gaafachiisus akka duraa natti ta’uu dide. Rakkoo keessa osoon jiruu innimmoo rakkoo sammuu guddaa natti ta’aa dhufe. Galgala yeroo hundaa bilbila osoo walii hin bilbiliin bullee hin beeknu. Boodarra bibillisaa qabamaa ta’uu eegale. Yoon isa gaafadhus fira kootu biyya alaatii naa bilbile jedhee na goowwomsuu eegale.
Ani hedduu isa amana. Waggaa saddeet waliin turre hundasaa guyyaa Jaalalleewwanii osoo hin kabajiin hafnee hin beeknu. Osoo guyyaan jaalalleewwanii kan waggaa darbee hin gahiin anis waliin kabajuuf jedhee isaafis ofii koofis waan hedduu bitee qopheessee osoon jiru inni gidduudhaan gara Magaalaa Finfinnee akka deemu natti hime. Naasuun natti gale. Akkan isa dhabuu eegaletu naaf gale. Gaaffii tokkon isa gaafadhe. Yoon si argachuu barbaade akkamiin si argadhun jedheen. Bifa aariidhaan innis “bilbilaan na argatta kaa!” naan jedhe. Takkaa gaaf tokko deebii akkas jabaa natti dubbatee hin beeku. Kun isa jalqabaa ti yoon jedhe soba hin ta’u. Anis aarii koo of keessatti qabadheen taa’e. Innis ka’ee deeme.
Guyyaan jaalalleewwanii osoo hin gahiin guyyaa lama durseen isa barbaacha gara Magaalaa Finfinneettan imala godhe. Akkan Finfinnee deemaa jiru itti hin himne. Osoo inni hin beekiin dhaqee isa gammachiisuufan yaade. Dhugaa hedduun isa jaaladha. Naman lubbuu koorraa hir’isee kenneefii umuriisaa dheeressuu barbaadu yoo jiraate isa dha. Garuu, kutaa Magaalaa kam akka jiraatu hin beekne. Kanaafuu, Mala uumeen isa gaafachuu barbaade. Yoon bakka jiru bifa kamiinuu gaafadhe ammas gaarii miti jedheen dhiise. Obboleessa isaa xiqqaa kan mana jirutti bilbileen bakka jiru gaafadhe. Innis ”mana Obboleessa keenya isa guddaa Burraayyuu bakka Maaram Safar Jedhamu jira” naan jedhe. Akka tasaa ta’ee animmoo obboleetti bakka sana jiraattun qaba. Isaanis wal beeku. Akkan isa argadhu abdii guutuun of jabeessee imala koon booda Burraayyuutti bu’ee mana obboleettii koo dhaqe.
Jaalallee koo kana osoo hin argiin buluun hedduu natti ulfaate. Obboleettii kootiin waan jedhee manaa bahu waan dhabeef callisee buluun filadhe. Bilbila isaaf yoon bilbilu hin kaasu. Si’a 100 yoo xiqqaate itti bilbilee naaf kaasuu dide. Boodarra bilbilasaa cufate. Buleen mana obboleessa isaa nama na geessu waliin deeme. Innis akka achi hin jirre natti himan. Obboleettiin isaa kan biroon mana sana jiraattu yeroo dheeraaf akka nuti hiriyyaa taane kan beektu ”Maal rakkootu jiramoo? Wal loltanii?” jettee na gaafatte. Anis waan jiru baaseen itti hime. Isheenis hedduu gadditee bilbilashee baaftee itti bilbilte. Isheef al tokkoon kaasee haasofsiise.
Yommuun sagaleesaa bilbila isheen gurra irratti qabatte keessaan xiqqo dhaga’u lubbuu kootu bahee fiiguu na gahe. Osoon harkaa butee dubbisee natti tola. Garuu,Safuun sodaadhe. Sayyuun kabaja mitiiree? Isheen osuma waliin haasoftuu bilbila fudhattee gadi baate. Yommuu ol deebitu fuullishee dhiiga uffatee dhufte. Maal rakkoon jiramoo jedheen lafarraa ka’ee ishee gaafadhe. ”Lakki homaa” naan jette. ”Bor bakka inni jirun si geessa akka as jirtu itti hin himiiin callisii” naan jette.
Halkan sun waggaa caalaa natti dheerate. Ganama ka’een waa isaaf bite hunda qabadhee gara karaatti bahee obboleettiisaa eeguu jalqabe. Isheenis daqiiqaa 10 booda dhufte.Wal fudhannee konkolaataa seennee imala keenya gaara inni jira jedhamutti eegalle. Iddoo adda addaatti erga buuneen booda gara Kondominiyamii Jamoo Lakkoofsa 1ffaa geenye. Yommuu gamoo inni irra jiraatu jala geenyu waan akka bakakkaa tokkotu mataa kootii haga qeensa miila kootti na weerare. Waan qalbii koo miti iji koo ilaalee amanuu hin dandeenyen arge. Nama aniwaggaa hamma kana isaaf jedhee waa meeqa dadhabee jiraadhe sababa ani hojii dhabetti jaalala koo qarshiin geeddare.
Nama biyya arabaa hojjechaa turte intala ollaa keenyaa hammatee gadi nutti bahe. Innis nahee ishee gadhiise. Isheenis itti maramtee akka haancaatti mudhiisaa qabattee ”Bareedaa koo maaltu ta’e” gaafa jettu ani of qabachuu dadhabeen akka nama mormi irraa citeen lafarra gangaladhee boo’uu jalqabe. Obboleettiinsaas lafaa na kaaftee ofitti na hammattee na fuutee qajeelte. Kennaan isaaf fidee dhufe hundasaa bakkee keessa facaaseen gara mana obboleettii kootti deebi’e. Aarii isaatiin osoo manatti hin deebi’iin ji’a lama booda gara biyya Sa’ud Arabiyaa deeme. Amma kunoo biyya ormaa keessa kophummaa koon dhamdhamaa jira. Guyyaan jaalalleewwanii anaaf guyyaan itti lubbuu koo dhabe dha.
Jaalattuu jaalallee ishee sababa faayidaan dhabde irraa!! Magaala Riyaadi Saudi Arabiyaarra.
Bayee namaa gadiisisaa obboletii tenyee jabadhu,rabii sii waliin ha ta’uu ?
Omaa mitii.. Namnii namaa wan ni jijjirama. Kanaaf namarratti of hin gatiin.. Hireen kee rabbi biraa argatatii…
Anaa nyaatu hin jedhuu akkamitti sijajjabeessinaree????? Maaloo siilaawoo akkuma Oromoo durii sana bareeddaa !!!!! Hey shamarrran amma baay’ee hin bareeddan jechuukoo miti kkkkkkkkkk na ofkalchaa !!!
Malumaafuu Me telefone 1234509876 call him!!
Sallamon Alamaayyo maagala finfiinnee irraay
Anis kanaakeetuu naqqoonamee jiraa. garuu Amma Araatii jaalelee argaachuu hin dandeenhee kanaf jaalalaa dhugaa waljalaane walin jiraana Anis nama waanakanaa naqoonamee wan bekuuf waay’een jaalalaa nafgalaa baay’een sijaaladhaa. kanaa argiitee debii jaalalaa koo akka nafdebiftuu abdin qaba.
baay’ee nama barsiiisaa.
Anis Akkuma kee sababa addaatin jalalle koo dhaben jira! Osoo waliti dhufne?
Barnoota Guddaa Dabarsa.
Nama gadisisa. jabadhu oboletiteena rabbii sifana hata’u